China Cylindrical Roller Iburu emepụta na suppliers | JITO Iburu
Cylindrical ala agba bụ otu n'ime inyefe biarin, nke na ọtụtụ-eji n'oge a machinery.It adabere na inyefe kọntaktị n'etiti isi mmiri na-akwado ndị na-agba gburugburu akụkụ. malite, oke ntụgharị dị elu na nhọrọ dị mma.
Nkebi Nke NJ202
Iburu .dị Cylindrical ala agba
Ngwa Mining / metallurgy / agriculture / chemical ụlọ ọrụ / akwa igwe
Est. Oge (ụbọchị) 3 Ndi kpakorita
Obere esemokwu na obere mkpọtụ, na-adịgide adịgide.
Ike ibu ibu
Nta ọnụọgụ nke esemokwu.
Oke ịkpa oke ọsọ.
Ngbanwe dị iche iche: N, NU, NJ, NF, NUP, NFP, NH, NN, NNU, NNF, FC, FCD.
Njirimara nke aru:
Cylindrical Roller amị nwere ike iche site na otu ahịrị, ahịrị abụọ, na ahịrị anọ.
Kinddị ụdị a nwere ike idobe ya na nnukwu radial na ụfọdụ ọrụ axial.
Ihe na-agagharị nke na-agba ọsọ na-agba ọsọ bụ cylinder, nsọtụ abụọ nke ahịrị mpụga nwere mkpọda na-agbazi agbazi nke nwere ike iwepụ nrụgide kọntaktị.
NN na NNU na-eme ka ihe nkedo na-eme ka ihe na-agbanwe agbanwe ma na-etinye aka na igwe dịka igwe
Basic ibu Fim
Itinggba ọsọ ọsọ
Cma ọ bụ
Nke gara aga: Deep uzo Ball Iburu 6002
Osote: Taper ala agba (Metric)
Anọ ahịrị Cylindrical ala agba